यी नेपाली सेलिब्रेटी, जसले बिहे पनि गरे, ‘डिभोर्स’ पनि गरे – Samatal Online
काठमाडौं । सेलिब्रेटीहरु प्रेम सम्बन्धमा रहेको र छिट्टै नै उनीहरुको प्रेम टुङ्गिएको समाचारहरु त बारम्बार आउने गर्छन् । यतिबेला देवांश राणासँग प्रेममा रहेकी साम्राज्ञी कुनै समय मयंक खड्कासँगको प्रेमका कारण चर्चामा थिइन् ।
← संसारकै सुन्दर अभिनेत्री जो शारीरिक बनोटकै कारण सबैको ध्यान खिच्छिन् (फोटो फिचर)
हे भगवान !!! चिता बन्यो ला*श जलेन, न्याय माग्दा माग्दै यत्रो दिन बित्यो ‘भिडियो सहित्’ →
पुर्व कानुनमन्त्री शेरबहादुरले आफु सिद्धिने की यस्ता मान्छे सिद्धाउने दिए चेतावनी !
२१ श्रावण २०७५, सोमबार २१:०२ Samatal Online 0
अब बाबुआमा नपाल्ने छोराछोरीमाथि कार्वाही हुने !
६ बैशाख २०७६, शुक्रबार १०:२६ Samatal Online 0
नयाँ बसपार्क क्षेत्रमा अनैतिक क्रियाकलापमा संलग्न २८ जना पक्राउ
३ जेष्ठ २०७६, शुक्रबार ०९:२१ Samatal Online 0